HONDA ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့ Michi Fujino !!! - JAPO Japanese News
ကြာ 30 Apr 2020, 14:41 ညနေ
HONDA က Motorbike တို့၊ ကားတို့မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ ကုမ္ပဏီထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တည်ထောင်သူ 本田宗一郎 Soichiro Honda က သူ့ရဲ့အသက် ၁၀နှစ်အရွယ်ကတည်းက လေယာဥ်ထုတ်လုပ်ဖို့အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။
သူအသက် ၁၀ နှစ်လောက်မှာ၊ 20ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိတဲ့ လေယာဥ်ကွင်းဆီကိုစက်ဘီးလေးနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ အမေရိကန်လူမျိုး pilot တွေမောင်းနေတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့လေယာဥ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိဘတွေမသိအောင်လည်းကျောင်းနားလိုက်ပြီး၊ အဲ့ဒီ 20ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိတဲ့ လေယာဥ်ကွင်းဆီကိုပဲ စက်ဘီးလေးနဲ့သွားနေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလက်တွေ့ဖြစ်စေပြီး၊ HONDA ကနေ small jet လေယာဥ်ငယ်ကို စထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်တဲ့အထိ အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ 藤野道格（ふじの口まちまさ）Michi Fujino ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူက HONDA group ရဲ့လေယာဥ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း Honda.Air.Craft.company ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သူက ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ Engineering of aviation ဘာသာရပ်နဲ့ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ HONDA ကုမ္ပဏီမှာဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က Aomori စီရင်စုရှိ Hirosaki မြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်၊ အစိုးရအလုပ်သမားတွေအတွက်အိမ်ခန်းပေးတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ခဲ့ပြီး အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ စက္ကူလေယာဥ်တွေကိုလွတ်ပြီး၊ လေယာဥ်သွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့တိုးမြင့်နိုင်မလဲဆိုပြီး၊ အသဲအမဲစဥ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။
Fujino ဟာလည်းပဲ 本田宗一郎 Soichiro Honda လိုပဲ၊ ကလေးဘဝကတည်းက လေယာဥ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိပ်မက်ကို မက်ခဲ့တယ်။
Fujino က HONDA group မှာအလုပ်ဝင်ခဲ့ရတာကတော့ ကားထုတ်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Engineering of aviation နဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့ပေမဲ့၊ အဲ့ဒီအချိန်ဂျပန်က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာစစ်ရှုံးပြီး လေယာဥ်ထုတ်လုပ်မှုကိုတားမြစ်ခြင်းခံရတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်။
လေယာဥ်ထုတ်လုပ်ခွင့်မရမယ့်အတူတူတော့ ကားထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ HONDA မှာဝင်လုပ်ခဲ့တာပါ။
ကားပဲထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီး ဝင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့၊ အလုပ်ဝင်ပြီး ၂ နှစ်အကြာမှာတော့ လေယာဥ်ထုတ်လုပ်ဖို့ပရောဂျက်ကျလာပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီပရောဂျက်အတွက်ခေါ်ခဲ့တာကတော့ 藤野 Fujino အပါအဝင် အသက် ၂၀ ကျော်ဝန်းကျင်လူငယ်တွေချည်းပဲဖြစ်တယ်။
အကြောင်းကတော့ HONDA ကကမ္ဘာမှာသူများနဲ့မတူတဲ့လေယာဥ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားလို့၊ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုမခေါ်ဘဲ၊ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုပဲ team တစ်ခုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။
藤野 Fujino လည်းတက္ကသိုလ်မှာဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့သင်ကြားလာခဲ့ပေမဲ့ လက်တွေ့အနေနဲ့ကတော့ လေယာဥ်တစ်ခါမှမထုတ်လုပ်ဖူးပါဘူး။ ကားထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် HONDA မှာအလုပ်ဝင်ခဲ့သူတွေသာလျှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ team ထဲမှာလူငယ်တော်တော်များများက ကားပဲပြန်ထုတ်ချင်ကြောင်းပြောလာကြတယ်။
သို့သော် တီထွင်မှုကိုဆက်လုပ်ဆောင်သွားပြီး၊ ၁၀ နှစ်အကြာမှာတော့ စမ်းသပ်လို့ရတဲ့လေယာဥ်အဆင့်ထိကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့၊ ၁၀ နှစ်လောက်အကြာ သုံညကနေစခဲ့တာစမ်းသပ်လေယာဥ်ပြီးစီးသွားတဲ့အထိ ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့ အရမ်းတန်ဖိုးရှိပြီး၊ ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့ အမေရိကန်လေယာဥ်ထုတ်လုပ်သူများက အကြိမ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြတယ်. …
သူကတော့ လုံးဝငြင်းခဲ့ပါတယ်၊ ဒီအဆင့်တွေအထိရောက်လာခဲ့တာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး၊ သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်လာခဲ့တယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ 藤野 Fujino တစ်ယောက် သူ့ရဲ့အိမ်မှာအိပ်မယ်လုပ်နေတုန်း ရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုရပါတယ်။
“ အတောင်ပံတွေပေါ်မှာ အင်ဂျင်တပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲ?”
ပုံမှန်ဂျက်လေယာဥ်ငယ်တွေမှာ ကိုယ်ထည်ရဲ့balance ကိုထိန်းညှိဖို့ အင်ဂျင်ကိုလေယာဥ်ကိုယ်ထည်ရဲ့အနောက်မှာပဲတပ်တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ်ထည်ရဲ့inner space ကကျဥ်းတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်အထိ ဘယ်သူမှမစဉ်းစားမိတဲ့ idea ပေါ့..
ဒါက HONDA.JET ရဲ့အသစ်ပြောင်းလဲတဲ့ ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အတောင်ပံပေါ်မှာအင်ဂျင်တပ်လိုက်ရင် air resistance များသွားနိုင်တယ်။ ဒါကိုသိတဲ့ 藤野 Fujino ကအတောင်ပေါ်မှာသင့်တော်တဲ့နေရာကိုရှာပြီး၊ အထူးသဖြင့် air resistance မများနိုင်မယ့်နေရာကို ရှာတွေ့သွားပါတယ်။
သူဟာ HONDA ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု အိုင်ဒီယာဖြစ်တဲ့ M.M idea ကိုအခြေခံခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ HONDA ရဲ့ ကားထုတ်လုပ်မှု idea ဖြစ်ပြီး၊ လေယာဥ်အတွက်လည်း ထိုနည်း၄င်းပဲ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပုံမှန်ထက်တော်တော်လေးမတူတဲ့ design idea မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်၊ management ပိုင်းက အဲ့ဒီပရောဂျက်ကိုရပ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပုံရပါတယ်။
သို့သော် အသက် ၃၇ နှစ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ 藤野 Fujino က management meeting အခန်းထဲကိုတစ်ယောက်တည်းဝင်သွားပြီး၊
တစ်ယောက်တည်း management level ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်ငြင်းခုံခဲ့တဲ့ 藤野 Fujino တစ်ယောက်၊ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အိမ်ကအမျိုးသမီးကို “ လာမယ့်အပတ်ကနေစပြီး အလုပ်ပြုတ်တော့မလားမသိဘူး…” ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။
သို့သော် သူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့တောင်းဆိုမှုအရ ဒီပရောဂျက်ကဆက်လုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရရှိပြီးနောက် နှစ် ၂၀ အကြာမှာတော့ လူလိုက်ပါစီးနိုင်တဲ့ HONDA.JET ဖြစ်လာပြီး၊ ဂျပန်ရဲ့ကောင်းကင်မှာပျံသန်းနိုင်သွားပါတယ်။
အမေရိကမှာတော့ ၂ နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းက စပြီးရောင်းချနေပေမဲ့၊ သေချာတာကတော့ မိမိတိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကင်မှာ ပြည်တွင်းထုတ်လေယာဥ်ကနေရာယူနေတာကိုကြည့်ရင် တော်တော်လေးပိတိဖြစ်စဖွယ်ပါပဲ။
藤野 Fujino ရဲ့အသက် ၂၀ နောက်ပိုင်းလောက်က အနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့ 本田宗一郎 Soichiro Honda နဲ့Toilet သွားရင်းတွေ့ဆုံဖူးပုံရပါတယ်။
သို့သော် 藤野 Fujino ရဲ့ပရောဂျက်က လျှို့ဝှက်ထားရတဲ့အတွက်၊ 本田宗一郎 Soichiro Honda ကိုပြောပြဖို့တောင် အခွင့်မသာလိုက်ပါဘူး။
“ ကျွန်တော်အခု လေယာဥ်ပျံကိုတီထွင်နေပြီခင်ဗျ!!!”
သူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကို လေးစားဂုဏ်ယူပေးမယ့် 宗一郎 Soichiro ကိုပြောပြချင်ခဲ့ပေမဲ့၊ 藤野 Fujino တစ်ယောက် သည်းခံခဲ့ရပါတယ်။
宗一郎 Soichiro ကသူ့လိုပဲလေယာဥ်ကိုအရမ်းမြတ်နိုးတာ သိနေပေမဲ့၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရလဒ်ကို သူ မပြသနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအကောင်အထည်မပေါ်လာခင်မှာပဲ 宗一郎 Soichiro တစ်ယောက် ဒီလောကကနေ ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ…
သူတို့ ၂ ယောက်လုံး ကလေးဘဝကတည်းကမက်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်ကတော့ လက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့ HONDA.JET ပါပဲ။
Grade တူတဲ့ခရီးသည်စီး small jet တွေက ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ အရောင်းရဆုံးလေယာဥ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Motorbike ၊ ကား တို့နောက်ကိုလိုက်ပြီး ဒီ HONDA.JET မှာလည်းရှယ်ယာတွေ တဟုန်ထိုး..တက်လာတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကလည်း တော်တော်လေးကောင်းလာတယ်လို့ ပြောရပါမယ်…
Air racing လေယာဥ်နဲ့ သမိုင်းဝင် Zero Fighter ဘယ်တစ်ခုပိုသာသလဲ ?!!